I-China Cloxacillin Benzathine i-Intramammary infusion (i-Dry Cow) Imveliso kunye neMveliso | Iqela leqela leTypt
I-10ml nganye iqulethe:
ICloxacillin (njenge benzathine ye-cloxacillin) ……… .500mg
Umkhululi (intengiso.) ……………………………………… 10ml
I-Cloxacillin benzathine intramammary infusion kwinkomo eyomileyo yimveliso ebonelela ngomsebenzi we-bactericidal ngokuchasene ne-bacteria yegram. iarhente esebenzayo, i-cloxacillin benzathine, ityuwa enyibilikayo e-penicillin e-semisynthetic, cloxacillin. I-cloxacillin sisiphumo esivela kwi-6-aminopenicillanic acid, kwaye ke ngoko inxulumene nekhemikhali nezinye iipenicillins. ine, nangona kunjalo, iipropathi ze-antibacterial ezichazwe ngezantsi, ezahlula kwezinye iipenicillins.
ICloxacillin benzathine intramammary infusion eyomileyo yenkomo iyacetyiswa ukuba isetyenziselwe iinkomo ekucimeni, ukunyanga usulelo olukhoyo lwangaphakathi kunye nokubonelela ngokukhuselwa kolunye usulelo ngexesha lokoma. Ukusetyenziswa okufanayo kwe-orbeseal ekucimeni kunika ukhuselo olongezelelekileyo kwi-patress ye-patder ye-udder, inegalelo kuthintelo losulelo olubini kunye ne-mastitis yekliniki ngexesha lokumiswa kwangoko.
Ukufakwa ngaphakathi kweenkomo zobisi kwiinkomo zobisi kunye neemazi
Yomisa unyango: emva kokusenga kokugqibela kokukhutshwa kobisi, thambisa ubisi ngokupheleleyo, ucoceke ngokupheleleyo kwaye ubulale iintsholongwane emibele kwaye ungenise imixholo yesirinji enye kwikota nganye. Unonophelo kufuneka luthathwe ukuthintela ungcoliseko lwenaliti engenziwayo.
Isirinji sinokusetyenziswa kanye kuphela. Inxalenye yesirinji esetyenzisiweyo mayilahlwe.
Akukho miphumo ingathandekiyo eyaziwayo.
Sukusebenzisa inkomo kwiintsuku ezingama-42 ngaphambi kokuba izale.
Sukusebenzisa imazi yeenkomo ezibolekayo.
Sukusebenzisa kwizilwanyana ezinesifo sehypersensitivity kwinto esebenzayo.
Kwinyama: iintsuku ezingama-28.
Ubisi: Iiyure ezingama-96 emva kokuzala.
Edlulileyo: I-Cloxacillin Benzathine Amehlo wamehlo
Okulandelayo: Ukudibana kwePenicillin Intramammary infusion
I-Lincomycin HCL Intramammary infusion (Iyenyusa ...
Ceftiofur Hydrochloride Intramammary infusion 5 ...
Ceftiofur Hydrochloride Intramammary infusion 1 ...